Ahoana no tokony hidiran'ny orinasa amin'ny haino aman-jery sosialy? | Martech Zone
Ahoana no tokony hidiran'ny orinasa amin'ny haino aman-jery sosialy?
Alakamisy, Aogositra 21, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity dia fizarana 2 amin'ny andiany 3. Fizarana 1 dia Rahoviana no tokony hiroboka amin'ny orinasan-tserasera ny orinasa? Miala tsiny amin'ny fanemorana ity lahatsoratra ity, herinandro vitsivitsy lasa izay tany am-piasana - tetikasa 3 no hifarana, ny iray amin'izy ireo efa herintaona mahery izao!
Niato ihany koa aho satria nisy ny fifanakalozan-kevitra tsara momba ny lahatsoratra voalohany, indrindra ny a lahatsoratra avy amin'ny olona ao amin'ny Deep Tech Dive:
Saingy manontany tena aho amin'ny filazan'i Doug ny tokony hataonao voalohany? Ampidiro ny mpitarika rehetra ao amin'ny orinasanao? ireo izay manana ny paikadin'ny orinasa.? Angamba any amin'ny planeta hafa i Indianapolis (Jeff, avy any Kentucky ianao, inona ny hevitrao?) Izay misy ny ekipa mpanatanteraka manana fotoana sy fahatakarana ny media sosialy hahatratra ny kumbaya. Saingy eto, ny fomba haingana indrindra hamonoana fandraisana andraikitra vaovao dia ny fanaovana azy io ho takalon'aina amin'ny marimaritra iraisana ambony. Tsy hoe tsy zava-dehibe ny fankatoavana ny mpitarika, fa saika tsy azo tanterahina izany, indrindra mialoha ny ahafahanao mampiseho ROI mivaingana.
Mety tsy azoko ilay marika tamin'ity lahatsoratro ity: tsy manahy aho ny amin'ny fanapahan-kevitry ny marimaritra iraisana eo amin'ny sehatry ny efitrano fivoriana. Ny tena mampanahy ahy dia ny manampy ny mpitarika ny orinasa hanaiky ireo fotoana sy fandrika izay hipoitra amin'ny alàlan'ny fanokafana ny orinasanao amin'ity paikady ity. Nanohy ny mpanoratra:
Indraindray ny paikady fanombohana kely dia mandeha tsara kokoa amin'ny lafiny maro. Ny hany ilainao dia ny mpanoratra iray mahaliana, ny sasany amin'ireo fitaovana tsy dia lafo, ary ny olana iray amin'ny fifandraisana azonao andrefesana. Angamba izany dia fototra toy ny fahazoana fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokalanao. Na fanentanana ny fitaovana sy programa vaovao fanampiana. Na fanitarana ny fahalianan'ny mpanjifa amin'ny filazàna anekdota mahaliana momba ny fampiasan'ny olona tena izy ny vokatrao na serivisinao.
Na dia ekeko aza fa hanome fanombohana haingana ny orinasanao ary tsy manam-potoana firy handehanana any amin'ny 'komitin'ny lavaka mainty', hitako io fomba io fa misy valiny tsara sy manimba. Angamba ny ohatra tsara indrindra hitako tamin'ity paikady ity dia ny namana Chris Baggottbilaogin'ny Fomba fanao tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny mailaka. Mazava ho azy fa nanana tombony i Chris satria samy tompona izy ary Lehiben'ny Marketing Officer an'ny ExactTarget, noho izany dia somary mora kokoa ny nitsambikina tamin'izany.
Ny fanontaniana dia tsy hoe nisy vokany ve ny bilaogin'i Chris. Nisy vokany tsy nampoizina! Ny fanontaniana dia hoe nahatratra ny zava-bitany feno ve izy io na nisy fiantraikany teo amin'ny orinasa, manerana ny fikambanana afaka manana. Nandeha i Chris ExactTarget manomboka Compendium Blogware (disclaimer: Nanampy an'i Chris hamolavola ilay fotokevitra tany am-boalohany aho) satria mba nieritreritra an'io koa izy!
Nahafantatra ny tadin'ny fitorahana bilaogy nandritra ny taona maro tao amin'ny Typepad i Chris. Tamin'ny fotoana namantaran'i Chris ny mety ho bilaogy ao amin'ny Search Engine Marketing, fampidirana, sns., Tara loatra vao tokony hiala Typepad ary araraoty tanteraka ny media fanaovana bilaogy. Naverina namboarina na aiza na aiza izy (mbola # 1 izy Fomba fanao tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny mailaka". Misy fehezan-teny am-polony vitsivitsy hafa izay tian'i Chris ho nifandray tamina taranaka mitarika ao amin'ny ExactTarget, saingy tsy azony mihitsy ny nahazo ilay andro vao nitsambikina izy ary nanomboka nibilaogy. Tiany koa ny hanana olon-kafa ao amin'ny bilaogin'ny fikambanana - hampitombo ny fiantraikany.
Iza no milaza aminao ahoana?
Izany no antony mahatonga ahy ho mpisolovava lehibe hahita ny mpanolo-tsaina ny haino aman-jery sosialy ho an'ny orinasanao. Ny consultant tsara dia afaka mandinika ny fitaovanao, ny orinasanao ary mahita ireo fitaovana mety mifanaraka amin'ny paikadinao. Ireo consultant media sosialy eo an-toerana dia mahafantatra ny tontolon'ny media sosialy ihany koa - ary afaka manampy anao amin'izany izay mba hanatanterahana ny paikadinao, fa tsy ny fomba fotsiny.
Afaka manana ny lehilahy IT anao WordPress mihazakazaka ao anatin'ny 5 minitra (ilay malaza fametrahana 1-tsindrio). Midika ve izany fa hainy ny manamboatra ny lohahevitrao ho an'ny mpikaroka motera fikarohana? Hainy ve ny mametraka ny permalinks sy ny lohatenin'ny pejy mba hisy fiantraikany lehibe indrindra? Fantany ve izay plugins tokony hananana? Tsia, tsy manao izany izy - raha tsy izany dia bilaogy mahomby sy miteny ary consulting no jereny. Ity dia iray amin'ireo faritra ahafahanao mamadika tanteraka amin'ny fanahin'ny Source Source.
Tiako ny loharano misokatra! Tiako ny WordPress! Hampiasa azy io ve aho hanombohana tetikady media sosialy feno ho an'ny orinasa? Tsia. WordPress dia rafitra fitantanana votoaty mifototra amin'ny mpanoratra, fa tsy rafitra fitantanana atiny afovoan'orinasa orinasa.
Iza ny feon'ny orinasanao?
Matetika, ny departemantan'ny varotrao dia tsy ny loharano tsara indrindra hampiasanao tetikady media sosialy. Vondrona mazoto ireo mpivarotra. Mieritreritra an-tongotra isika ary matetika no ao an-tsaina ny paikadin'ny marika ankapobeny rehefa miteny. Raha miditra amin'ny tambajotra sosialy ianao ary manomboka milahatra antsamotady dia mazàna izany natokana ho an'ny BS Bingo, mandeha ho azy io F. Raha tsy asaina miala ianao, dia miomàna hampikotrokotroka ny orinasanao ampahibemaso noho ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny media sosialy - fitokisana.
Misy olona ao amin'ny fikambanananao amin'izao fotoana izao izay nanangana fitokisana, fahefana ary tambajotra goavambe ao amin'ny sehatr'izy ireo. Ireo no mpampifandray sy hery mitaona izay ilainao hakana ny paikadinao!
Aza mihinana iray monja!
Hevitra farany momba ny fomba hanombohana. Azafady, aza apetraka amin'ny 'manam-pahaizana' tokana ny fitokisanao. Ny manam-pahaizana dia teny iray mifandraika, indrindra amin'ny media sosialy. Ny orinasa dia manala ny zava-misy ankehitriny fotsiny momba ny fomba hampiasana an'ity fitaovana tsy mampino ity hananganana fifandraisana sy fahitana ho an'ny orinasany. Tandremo ny teny mahery indrindra toy ny tsy nisy, rehetra, tsy misy olona, ​​daholo… ny paikady tsy andovanao vola dia mety ho ilay nandresy anao lehibe indrindra.
Mitadiava mpanolotsaina media sosialy vitsivitsy, olona afaka mahatakatra ny orinasanao, ny indostriao, ny paikadim-barotra, ny fananganana ny haitao ary afaka mampianatra ny ekipanao mpitarika amin'ity haitao vaovao mahavariana ity.
Tags: Lahatsary Marketing
Rahoviana no tokony hiroboka amin'ny orinasam-pifandraisana ny orinasa iray?
Indraindray ianao dia tsy afaka miomana ampy
Dec 15, 2008 ao amin'ny 3: PM PM
Doug, faly izahay nahita fizarana hafa amin'ny andianao. Misaotra tamin'ny famelana ny ahiahinay momba ny marimaritra iraisana amin'ny fitantanana. Manaiky izahay fa zava-dehibe ny manampahaizana amin'ny fisorohana ny vanja milevina sy ny fahitana toerana mety. Lohahevitra lehibe ho an'ny vahoaka teknolojia lalina eto amintsika, koa izahay manohy ny fandrakofanay ny andiany ao amin'ny McBruBlog. Manantena ny fizarana faha-3 izahay! - David